कुनै प्रतिद्वन्दीले बार्सिलोनालाई तर्साउन सक्दैन, युनाइटेडसंगको जितबाट बसिलोनाले सिक्यो ३ चिज !! - Experience Best News from Nepal
च्याम्पियन लिग बार्सिलोनाले १-० ले युनाइटेड माथि युनाइटेडकै घरेलु मैदानमा बिजयी हासिल गरेको छ । एक आत्माघाती गोलले गरेको फैसलाले बार्सिलोनालाई त्यो खुसी र चमक भने दिलाउन सकेन । प्लेयर रेटिंगमा समेत बार्सिलोनाको पूर्ण टिमको सुखद नतिजा देखिएन । मैदानमा भएको पूर्ण खेलमा डीफेन्डर जिराड पिकेको खेललाई सर्वाधिक सान्दर्भिक रहेको मानियो ।
अब बार्सिलोनाले उक्त खेलबाट के सिक्ने त ?
१) सच्चाईलाइ हेर्ने हो भने स्वरेज पुन विवस देखिन्छन, अर्काको घरेलु मैदानमा उनले गोल गर्न अझै सकेका छैनन । २०१५ यता यूरोपियनमा प्रतिद्वन्दी गोल दर्ता गर्न स्वरेजले गर्न सकेका छैनन् । तर युनाइटेड विरुद्धको खेलमा उनको प्रयास भने अपरिहार्य ठहरियो, मेस्सीको पासलाई उनले बनाएको सम्भावनालाई बार्सिलोनाले अनुसरण भने गर्ने पर्छ । यो सिजनको लागि स्वरेजले खाता खोल्न सकेनन किनकी स्वरेजले गरेको गोल यूएफाले लुक सको आत्मघाती गोल दर्सायो ।
स्वारेजको उक्त खेल ५० औ च्याम्पियन लिग खेल थियो, पक्कै स्वारेजले घरेलु मैदान क्याम नाउमा अवस्य गोल गर्ने नै छन् ।
२) सर्जियो बुस्केट्सको फर्म धरातल, मिडफिल्डमा राम्रो पदर्शन गर्ने बुस्केट्सको खेल युनाइटेड विरुद्धमा भने निकै चिन्त्ताजनक रहेको देखियो । उनको खेलले भल्भारर्डेलाई निकै चिन्तामा पुर्याएको छ । बुस्केट्सले क्वाटरफाइनल खेल अगाबै आफु ओल्ड ट्राफर्डमा खेल खल्नका निम्ति निकै उत्साहित रहेको बताएका थिए तर उनको हर प्रयास फ्लप देखियो ।
उनले गरेको ट्याकल कारण रेड कार्ड खानु पनि सक्ने अवस्था मैदानमा सिर्जना भएको थियो । भाग्यवस उनले दिएको ट्याकलबाट १७ औ मिनेटमा पहेलो कार्डमा मात्रै सिमित रहे ।
बुस्केट्सले खेलको ३ औ मिनेटमा युनाइटेडका खेलाडीलाई धक्का दिएका थिए तर उक्त बेला पहेको कार्ड दर्ता भएको थिएन तर उनले पोग्बालाई १७ औ मिनेटमा तानेर लडाए फलत उनि पहेलो कार्डको फन्दामा परे । उनले बक्स बाहिर गरेको ह्यान्डबल भने अफिसियलले अनदेखा गर्यो ।
दुई कारण बुस्केट्सको रेड निकै सम्भावना थियो तर भाग्यले उनि उक्त अवस्थाबाट जोगिए । उनले दिएको बल पास मेस्सी र मेस्सी-स्वारेजको प्रयासले गोल मात्रै बुस्केट्स मैदानमा रहनुको औचित्य मानियो ।
३) च्याम्पियन लिग प्रतिद्वन्दीले बार्सिलोनालाई तर्साउन सक्दैन, बार्सिलोनाको फर्म र बिजयीले सेमी फाइनल यात्रालाई जिवितै राखेको छ । हुन त् बार्सिलोनाले आफ्नो खास पदर्शन विना नै रेड देभिल्सलाई हरायो र घरेलु खेल बाकी नै छ ।
भल्भार्डे टिम बलियो बनेर मैदान प्रवेश गर्यो तर धेरै गल्ति बोकेर निस्किए, जित थियो तर सोचेको जित भने पक्कै थिएँन । काउन्टर रोक्ने देखि अन टार्गेट बल रोक्नमा भने बार्सिलोना सक्षम रहयो ।
९० मिनेटमा रेड देभिल्सले कुनै बल ओन टार्गेट प्रहार गर्न सकेन, उक्त खेलाईमा जिराड पिके र सेमेड़ो डिफेन्सका हकदार बने तर राकिटिक, बुस्केट्स, अलाबा निरिह देखिए । मेस्सी समेत चम्किएको भन्न सकिन्न, तर चोटको बावजुत उनि मैदानमा थिए ।
बार्सिलोनाले अन्तिमको चारको सम्भावना बनाइसकेको छ चारमा लिभरपूलको सामना गर्ने नै छ । कुनै पनि प्रतिद्वन्दीले बार्सिलोनालाई तर्साउन सक्दैन् ।
बार्सिलोनामा सामेल हुन नेय्मारलाई रोक्न अझै यी प्रमुख बाधा छन् !! के गर्लान नेय्मार